माओवादीका २२ प्रतिष्ठानको काम, ५ करोड ४६ लाख झ्वाम ! – YesKathmandu.com
माओवादीका २२ प्रतिष्ठानको काम, ५ करोड ४६ लाख झ्वाम !
बुधबार १९, माघ २०७३
‘लुटको धनमा फुपुको श्राद्ध’ गर्नेहरुको बिगविगी भएको मुलुक न पर्यो नेपाल । जनताको खुन पसिनामा तर मारेर आफ्नो कार्यकर्ता पोस्न माओवादी कतिसम्म व्यस्त छ भन्ने दृष्टान्त बुझ्न संष्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यनन मन्त्रालयतिर पुगे पुग्छ ।
त्यहाँबाट माओवादीले राज्यकोषको यतिसम्म चरम दुरुपयोग गरेको छ कि मरेका नाममा त परै छोडिदिँउ जिवितै रहेका कार्यकर्ताहरुको नाममा समेत रकम निकासी गरी कार्यकर्ता पोस्ने काम भएको छ । विरक्त लाग्दो दृश्य चाहिँ कस्तो छ भने,माओबादीहरु अहिले आफ्नै नेताका नामको प्रतिष्ठान बोकेर राज्यकोषको पैसा निकाल्न सिंहदबार धाइरहेका छन् । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले दिएको विवरण अनुसार चालु आर्थिक बर्षमा मात्रै माओबादी नेता कार्यकर्ताको नाममा स्थापना भएका प्रतिष्ठानहरुले ५ करोड ४६ लाख रुपैयाँ लगेका छन् । माओबादीसँग जोडिएका प्रतिष्ठानको संख्या मात्र २२ वटा पुगेका छन ।
चाहे सुरेश वाग्ले प्रतिष्ठान होस वा पोष्टबहादुर बोगटी स्मृति प्रतिष्ठान होस । इच्छुक प्रतिष्ठानको नाम देखि निर्मल लामाको नाममा समेत प्रतिष्ठान खोली माओवादीहरुले लुट मच्चाएका छन ।त्यस्तै नरबहादुर कर्माचार्य प्रतिष्ठान खडा गरी त्यहाँ समेत रकम निकासा गरिएको छ । सबैभन्दा बढी रकम पाउनेमा सुरेश वाग्ले प्रतिष्ठानले ९७ लाख रुपैयाँ टप्काएको छ । पोष्टबहादुर बोगटी स्मृति प्रतिष्ठानलाई ८० लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । इच्छुक सांस्कृतिक प्रतिष्ठानलाई ७० लाख रुपैयाँ दिइएको छ ।
कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापकमध्येका एक नरबहादुर कर्मचार्य प्रतिष्ठानलाई ७० लाख, निर्मल लामाको नाममा समेत प्रतिष्ठान खडा गरी यसै वर्ष मात्र मन्त्रालयले ६० लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । त्यस्तै माओबादीले जनयुद्ध संरक्षण केन्द्र स्थापना गरेको छ । त्यो केन्द्रलाई पर्यटन मन्त्रालयले यो बर्ष ७० लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको छ ।
झापामा एउटै ब्यक्तिका नाममा स्थापना भएका दुईटा प्रतिष्ठानले अनुदान पाएका छन् । गौरीशंकर खड्का स्मृति प्रतिष्ठान झापाले ५ लाख रुपैयाँ र गौरीशंकर प्रतिष्ठान झापाले २ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएका छन् । माओबादी कार्यकता बासु शाक्यको नाममा परिषद बनेको छ । त्यो परिषदलाई पर्यटन मन्त्रालयले यो बर्ष ५ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । यस्तै माओबादीको जनयुद्धकालिन ‘जनसेना’ (पिएलए) को नाममा पनि प्रतिष्ठान बनेको छ ।
पूर्ब पिएलए महिला प्रतिष्ठानलाई पर्यटन मन्त्रालयले ४ लाख रुपैयाँ दिएको छ । माओबादीको जनसास्कृतिक प्रतिष्ठानलाई ५ लाख रुपैयाँ दिइएको छ । तराई मधेश जनयुद्ध सहिद स्मृति प्रतिष्ठानलाई मन्त्रालयले २५ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । दोलखा जिल्लामा पर्यटन मन्त्रालयबाट अनुदान पाउने माओबादी प्रतिष्ठानको संख्या निकै छ । दोलखाका शहिद बुद्धिमान स्मृति प्रतिष्ठानले १५ लाख, दलबहादुर थामी स्मृतिले १० लाख, रितबहादुर खड्का स्मृति प्रतिष्ठानले ५ लाख, रामबहादुर घिसिङ स्मृति प्रतिष्ठानले ४ लाख र तिलक केसी स्मृति प्रतिष्ठानले ४ लाख रुपैयाँ अनुदान लगेका छन् ।
यता, भक्तबहादुर स्मृति प्रतिष्ठान मकवानपूरले ५ लाख रुपैयाँ लगेको छ । तयस्तै सहिद बलराम प्रतिष्ठान बिरेन्द्रनगर चितबनले १० लाख रुपैयाँ अनुदान पाएको छ । यस्तै धनुषाको रामबृक्ष यादब स्मृति प्रतिष्ठानले ४ लाख र धनुषाकै अजबलाल यादब स्मृति प्रतिष्ठानले ४ लाख रुपैयाँ अनुदान पर्यटन मन्त्रालयबाट पाएका छन् । झापामा एउटै ब्यक्तिका नाममा स्थापना भएका दुईटा प्रतिष्ठानले अनुदान पाएका छन् । गौरीशंकर खड्का स्मृति प्रतिष्ठान झापाले ५ लाख रुपैयाँ र गौरीशंकर प्रतिष्ठान झापाले २ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएका छन् । दाङ्गको कुलानन्द बन्जाडे स्मृति प्रतिष्ठानलाई २ लाख रुपैयाँ अनुदान दिइएको भेटिइएको छ ।
राजा वीरेन्द्रसँग एडिसी टिका धमलाका भुल्नै नसक्ने यस्ता छन् संस्मरण